Wasaaradda Waxbarashada XFS oo maanta billawday qaadista Imtixaanka fasalka 12aad oo ay galayaan 35 kun oo Arday. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Wasaaradda Waxbarashada XFS oo maanta billawday qaadista Imtixaanka fasalka 12aad oo ay...
Wasaaradda Waxbarashada XFS oo maanta billawday qaadista Imtixaanka fasalka 12aad oo ay galayaan 35 kun oo Arday.
Wasaaradda Waxbarashada XFS ayaa maanta billawday qaadista Imtixaan Sanadeedka Dugsiga sare (Fasalka 12aad) ee 2021-2022, Ardayda guud ee galeysa Imtixaanka waa 35 kun sida ay sheegtay Wasaaradda.
Ardayda ayaa labo qayb kala ah, qaar waxa ay sanadkaan dhammeeyeen Dugsiga sare halka qaybta kale ay yihiin Ardaydii sanadkii hore ku dhacday Imtixaanka oo Wasaaradda Waxbarashada XFS fursad u siisay markale in ay dib u galaan.
Ra’iisul Wasaaraha Xafiiska banneenaya ee Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta daah-furay Imtixaanka Dugsiga sare (Fasalka 12aad) oo Magaalada Muqdisho ay ku galayaan Ardayda ugu badan oo tiro ahaan dhan 25 kun oo arday sida Wasaaraddu sheegtay.
Rooble ayaa Ardayda u rajeeyay in ay nasiib wacan ku galaan kuna dhammeystaan Imtixaanka isaga oo alle ugu baryay in uu ku guuleeyo, Waalidiinta, Macalimiinta & dhammaan cid weliba oo gacan ka geysatay Waxbarashadooda ayuu u mahadceliyay.
Maxamed Xuseen Rooble, Ardayda waxa uu ka dalbaday in ay dalkooda wax taraan, dedaalkoodana ay kordhiyaan isla markaana waxbarashada sii wataan ilaa ay ka gaaraan heer ka sarreeya halka ay maanta joogaan.
“Runtii Maanta farxad ayay ii tahay in aan daah-furo imtixaanka fasalka 4aad ee Dugsiga Sare, waxa aan leeyahay alle ha idiin fududeeyo, Waalidkii idinku soo tiir & tacab beelay in aad ka war heysaan, macalimiinta wax idin soo bartay meelkasta oo ay joogaan waxa aan leeyahay waad mahadsan tihiin” Ayuu yiri Maxamed Xuseen Rooble.
Wasaaradda Waxbarashada XFS ayaa sanad weliba waxa ay qaataa Imtixaan sanadeedka Dugsiga Sare (Fasalka 12aad), waxa ay Ardayda kaalmaha kusoo baxa ay siisaa Deeqaha Waxbarasho ee loogu deeqo.
Previous articleQaar kamid ah Maraakiibta sida sharci darrada uga kalluumaysta badda Soomaaliya oo lagu daray liiska madow
Next article41 ruux ayaa geeriyootay, malaayiin kale way ku go’doosan yihiin Daadad ku rogmaday Bangladesh & India.